Anyị nwalere Huawei TalkBand B2 na vidiyo | Gam akporosis
Francisco Ruiz | | Huawei, MWC, Nyocha
Na Sọnde, Machị 1, onye nrụpụta Eshia gosipụtara ngwaọrụ ọhụrụ ya na mmemme. N'otu aka anyị hụrụ mbadamba Huawei MediaPad X2, ngwaọrụ nke ahụ Anyị enyochaala ya na vidiyo ma hapụ anyị nnukwu mmetụta na n'aka nke ọzọ enwere smartband ohuru site na emeputa: the Huawei TalkBand B2.
Ngwaọrụ nke ga - abụ naanị smart band, mana ekele maka ekweisi bluetooth anyị nwere ike iji ya mee ma nata oku. N'ezie, dozie akpa gị n'ihi na egwuregwu ahụ dị ntakịrị ọnụ. Ka anyị gaa n'ihu nyocha vidiyo ebe anyị nwalere TalkBand B2 na MWC 2015.
TalkBand B2, ogo na-abịa na ọnụahịa, ọ dị elu n'ezie?
Dị ka ị ga-ahụ na vidiyo ebe anyị nwalere Huawei TalkBand B2, Otu ihe doro anya: nhazi ya dị mma ma ihe ndị adịchaghị adị na-emepụta ahụ nke Huawei smartband karịrị ihe doro anya.
Dị ka ngwaọrụ ọ bụla nke ụdị a, Huawei TalkBand B2 na-enye gị ohere nyochaa ụra, ọrụ pedometer, elekere nkwụsị ... na mgbakwunye na nke gị Ihe ntanetị 7 ga-achọpụta egwuregwu ị na-arụ na-akpaghị aka na ọ ga-rụọ ọrụ gị counter ozugbo. Ihe nke na-enweghị isi ga-enwe ekele maka ya.
Ọ na-nwere a Bluetooth ọrụ otú ahụ you nwere ike iji ngwaọrụ iji mee ma ọ bụ nata oku. Na vidiyo anyị nyochara ihe nlereanya ahụ na eriri akpụkpọ anụ, ọ bụ ezie na a ga-enwe ụdị ọzọ na eriri roba. Nsogbu a na-enweta ụgwọ.
Ọ na-atụ anya na Huawei TalkBand B2 na-efu 169 euro maka ihe nlere ahụ na eriri roba, mgbe ụdị akpụkpọ anụ ahụ ga-abụ euro euro 199. Ọnụahịa nke m yiri ka ọ karịrị m maka ụdị ejiji a, ọ bụ ezie na ọ ga-adị mkpa iji hụ ma onye nrụpụta Asia mechara wepụta Huawei TalkBand B2 na ọnụahịa a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei » MWC 2015: Anyị nwalere Huawei's TalkBand B2